Saacadaha, maalmaha & taariikhaha la dheelayo kulamada harsan ee Serie A oo la iclaamiyey | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Saacadaha, maalmaha & taariikhaha la dheelayo kulamada harsan ee Serie A oo...
(Roma) 02 Juun 2020 – Waxaa ugu dambayn laba todobaad kaddib dib u furmaya Horyaalka Talyaaniga ee Serie A, kaasoo u hakaday cudurka Covid-19, balse iminka lagu heshiiyey in oodda laga rogo 20-ka bishan, balse waxaa kasoo horreeya Coppa Italia oo la dheelayo wixii loo gaaro 12-ka Juun.
Kulamada Horyaalka oo jadwalkooda la soo saaray waxaa ka mid ah kulanka adag ee Juventus-Lazio oo dhacaya fiidnimada Isniinta 20-ka Luulyo.
Kulamada ayaa dhici doona min 16:15, 18:30 iyo 20:45 kaddib markii ay kooxuhu diideen inay galab dheer ciyaaraan qorraxda xagaaga ee aadka u diirran darteed.
Waxaa yaab leh inay jiri doonaan 5 maalmood oo aan kubad la ciyaareeyn, inta u dhaxaysa 20-ka Juun ilaa 23-ka Luulyo; Juun 25, Juun 29, Luulyo 3, Luulyo 10 iyo Luulyo 17.
Maalmaha todobaadyada 26-aad, 37 iyo 38 ayaga gadaal ayaa laga soo sheegi doonaa xilliga ku habboon.
Hoos ka eeg min todobaadka 25-aad
Previous articleRuushka oo Turkiga ka caawinaya farsamaynta dayuurado & gantaalo casri ah (Wada hadal socda)
Next articleCaddaan ku hubaysan qoryaha meelaha fog wax ka shiisha oo lagu arkay xaafado ay dibedbaxyo ka socdaan (Dadka oo taxaddar la faray)